Maamulka Gobolka Nugaal oo ka Digey Lacago Been Abuur ah (dhegayso) – Radio Daljir
Maamulka Gobolka Nugaal oo ka Digey Lacago Been Abuur ah (dhegayso)
Luulyo 6, 2017 3:45 g 0
Gudoomiyaha gobalka Nugaal Cumar Cabdulaahi Faraweyne oo Waraysi sinayeey Radio Daljir ayaa ka hadlay lacagaha shiling somaaliga ah ee Kooxda alshabaab ka joojisay qaybo kamid ah Koonfurta somalia oo ay jiraan degaano ay maamulaan.
Cumar Faraweyne ayaa digniin Culus u jeediyeey Ganacsatada doonaysa in Puntland ay soo galiyaan lacagaha shilig somaaliga faalisada ah ee lagu daabacay Koonfurta somaaliya ,gaar ahaan degaanada ay maamulkaa Kooxda Alshabaab.
Gudoomiyaha Gobalka Nugaal ee Dowladda Puntland ayaa sheegay in kantaroolada Magalooyinka Puntland aad loo xoojiyeey oo lacagahaas an lasoo galin karin ciidamadana ay xog ku heleen in lacagahaas la doonayo in Puntland la geeyo.
Dhanka kalena, gudoomiye Cumar Faraweyne ayaa sheegay inay wadashaqayn buuxda la leeyihiin shacabka Puntland,isago sheegay in shacabka la’antood aysan shaqayn karin.
Bilayska Puntland iyo Dagaalka Kadhanka ah Lacagaha Been Abuurka ah (dhegayso)